Gaari waxyaabaha qarxa siday oo xalay lagu qabtay degmada Dayniile (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Gaari waxyaabaha qarxa siday oo xalay lagu qabtay degmada Dayniile (Daawo Sawirada)
Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Somaliya ayaa xalay 2:20 Daqiiqo waxa ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa, kaasi oo la doonaayay in lagu dhibaateeyo shacabka Somaliyed.
Gaarigaan oo noociisa uu yahay Kaarib, ayaa ciidamada waxa ay ku qabteen Degmada Dayniile gaar ahaan Xaafada Ciise Cabdi, kadib markii la helay macluumaadka ku aadan gaarigaan.
Gaarigaan Kaaribta ayaa waxaa laga buuxiyay waxyaabo loo adeegsan rabay Qaraxyada, waxaana ka mid ah Haamaha yar ee Suujimada, Xabadaha Qoriga loo yaqaanka Sabanka iyo waxyaabo kale.
Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay Labo qori oo Nooca Ak47 ah, kaasi oo saarnaa gaariga kaaribta ah ee Qaraxa loo adeegsan rabay.
Ciidanka NISA ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay dadkii saarnaa gaarigaasi oo aanan la shaacin tiradooda, balse sida Saraakiisha NISA ay sheegeen Baaris ay ku socoto Raggaasi.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane, ayaa Wakaalada Wararka SONNA u sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen qabashada gaarigaasi.
“Ciidamada geesiyaasha Qaranka Somaliyed ee NISA ayaa xalay 2:20 qabtay gaari Kaarib ah, oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo 2-qoryaha Ak-47 ah, waxaana lagu qabtay Degmada Dayniile Waaxda koobaad ee Ciise Cabdi, waxaa tagay goobta Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho.”Ayuu yiri Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Xalane
Wafdi ka socda dowladda Hoose ee Istanbul oo qiimeyn ku sameeyay wadada 30-ka (Daawo Sawirada)